Waa maxay Bakhaarka ePttAVM? Sidee loo shaqeeyaa ePttAVM? Sidee loo furaa Bakhaarka 'ePttAVM'? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWaa maxay Bakhaarka ePttAVM? Sidee loo shaqeeyaa ePttAVM? Sidee loo furi karaa Bakhaarka ePttAVM?
20 / 05 / 2020 GUUD, TURKEY
dukaan epttavm Waa maxay dukaan epttavm Sidee bay u shaqaysaa epttavm Sida loo furo dukaanka epttavm
PttAVM Furitaanka Bakhaar / EPttAVM waa waxa kaliya ee aad ka fajacsan tahay iibinta tusahan elektaroonigga ah. EPttAVM waxaa loo tixgelin karaa inay tahay hab ku habboon shirkadaha leh dukaamo jir ahaaneed ama doonaya inay wax ku iibiyaan internetka. EPttAVM waa mid ka mid ah meelaha suuqyada ee abuuraya dariiq iib oo dheeraad ah oo loogu talagalay shirkadaha doonaya inay ka iibiyaan khadka tooska ah. Ka iibinta EPttAVM waxay kuu oggolaaneysaa inaad gaarto dhagaystayaal bartilmaameed oo kala duwan. Waxaa jira waxyaabo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nidaamka furitaanka bakhaarka "EPttAVM" si aad u iibiso.
Tilmaamahan waxaan u diyaarinay kuwa raba inay furaan dukaankooda E Ptt AVM, sida loo furo dukaan ku yaal EPttAVM / Sida loo furo dukaan EPttAVM, xaaladaha furitaanka dukaanka EPttAVM, maareynta bakhaarka EPttAVM, si loo iibiyo alaabooyinka EPttAVM, maxay yihiin shuruudaha iibinta EPttAVM Mawduucyo badan sida dukumintiga loo baahan yahay dukaannada (dukumiintiyada dukaanka ee EPttAVM), Qiimaha dukaanka EPttAVM / khidmadaha kaydka dukaanka EPttAVM iyo qiimaha guddiga kaydinta dukaanka ee EPttAVM, tus.
Waa maxay EPttAVM?
EPttAVM waa madal laga dukaameysto oo internetka ah oo ay shirkadaha ku furan karaan dukaamada ayna ku gaari karaan macaamiishooda iyagoo soo bandhigaya badeecadooda. Waxaan sidoo kale qeexi karnaa warbaahintaan, oo ay ku jiraan noocyo fara badan, sidii goob suuq suuq geyn ah. Shirkadda loo yaqaan 'EPttAVM', oo ah shirkad hoos timaad shirkadda 'PTT', milkiilayaasha shirkaduhu way furi karaan bakhaarada waxayna iibin karaan alaabada ay iyagu iska leeyihiin.
Sidee ayuu EPttAVM u shaqeeyaa?
EPttAVM waxay u shaqeysaa sidii moodel suuq suuqeed toos ah. Qaabkan, milkiilayaasha shirkadu waxay bilaabi karaan iibinta iyagoo ka furaya dukaan ku yaal EPttAVM. Milkiilayaasha bakhaarka ayaa furi kara badeecadooda kadib marka la liis gareeyo. Halkan, dukaamada waxaa ku waajib ah inay bixiyaan khidmadyo kala duwan oo komishan ah iyadoo loo eegayo nooca sheyga ay iibiyaan, iibka kadib markay iibiyaan.
Ku saabsan EPttAVM
EPttAVM waa madal laga dukaameysto oo internetka ah oo ay shirkadaha ku furan karaan dukaamada ayna ku gaari karaan macaamiishooda iyagoo soo bandhigaya badeecadooda. Waxaan sidoo kale qeexi karnaa warbaahintaan, oo ay ku jiraan noocyo fara badan, sidii goob suuq suuq geyn ah.
Maxay tahay sababta aan Bakhaar uga dhex furo EPttAVM?
epttavm dukaamada ayaa u furan / epttavm iibiyaha, maaddaama ay kuu oggolaaneyso inaad gaarto dhagaystayaal kala duwan, kordhinta araggaaga internetka, waxaad ka sameyn kartaa iibka wax soo saarka internetka adoo jooga meel kasta oo Turkey ah. Tani waxay muhiim u tahay abuurista kanaal dheeraad ah oo shirkadaada ah.
Habka Furitaanka Bakhaarka EPttAVM
Waxaa jira dhowr talaabo oo ay tahay inaad raacdid nidaamka furitaanka bakhaarka "EPttAVM". Marka hore "Codsiga Dukaanka EPttAVMWaa inaad ku buuxisaa macluumaadka looga baahan yahay bogga ”bogga. Kadib markaad dhammeyso macluumaadkan iyo dukumiintiyada, hawshaada furitaanka dukaan ayaa bilaabaneysa.
Sidee loo Furaa Dukaanka EPttAVM?
Waxaa jira dhowr tillaabood oo aad u baahan tahay inaad raacdo inta lagu gudajiro geedi socodka furitaanka dukaannada EPttAVM / Furitaanka dukaan EPttAVM. marka hore "Codsiga Dukaanka EPttAVM" Waxaad u baahan tahay inaad buuxiso macluumaadka loo baahan yahay bogga. Kadib markaad dhammeyso macluumaadkan iyo dukumiintiyada, hawshaada furitaanka dukaan ayaa bilaabaneysa.
Maxay yihiin Dukumentiyada Looga Baahan Yahay Furitaanka Bakhaarka EPttAVM?
Waa inaad noqotaa shirkad si aad u furto dukaan EPttAVM / inaad furato dukaan EPttAVM. Kuwa aan shirkad laheyn waa ku iibin karaan dukaamada halkan laga furo. Mulkiilayaasha shirkada waxaa ku waajib ah inay ku buuxiyaan macluumaadka soosocda foomka arjiga markay dalbanayaan inay dukaan ka furaan halkan:
Magaca shirkadda / Cinwaanka
Cinwaanka Guryaha 'Warehouse'
Xafiiska cashuuraha iyo lambarka
Tallaabada xigta, macluumaadka qaar ee qofka idman ayaa loo baahan yahay. Macluumaadkaani waa sida soo socota:
Tallaabada xigta, waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan badeecada iyo shirkadda ayaa loo baahan yahay:
Macluumaadka shirkadda (ganacsade weyn, ganacsade, ganacsade)
Habka rakibida iyo habka cusboonaysiinta (API, XML, EXCEL)
Liistada alaabada la soo saaray
Marka laga reebo qandaraaska adeegga;
Diiwaanka Ganacsiga iyo Wareegtada Saxiixa
Waxaa looga baahan yahay Foomka Alaabada.
Kadib markaad gasho macluumaadkan, waxaad sameyneysaa dalabkaaga dukaanka.
Muddo intee le'eg ayaa la furi karaa Dukaanka 'EPttAVM'?
Kadib markaad sameyso arjigaaga dukaanka inaad ku iibiso EPttAVM / inaad ka iibiso EPttAVM, macluumaadka aad geliso waa la hubinayaa howshanna way kala duwanaan kartaa. Waxaad ku raaci kartaa habka bakhaarkaaga adoo maraya macluumaadka xiriirka ee aad la wadaagtid.
Ma Iibin Karaa Iyadoo Aan Furin dukaanka 'EPttAVM'?
Iibka laguma sameyn karo EPttAVM iyadoon dukaan la furin. Mulkiileyaasha shirkaduhu way furi karaan bakhaarada internetka ee EPttAVM waxayna ku liis gareeyaan wax soo saarkooda bartan
Ma Lacagbaa In La Furiyo Dukaan EPttAVM?
Ma jiro khidmad furitaanka dukaanka 'EPTT AVM'. Kadib markaad gasho dukumiintiga iyo macluumaadka lagama maarmaanka ah, waad furi kartaa dukaan. Intaa waxaa sii dheer, ma jiro lacag khidmadaha wax soo saarka ah. Joojinta komishanka waxaa loo sameeyaa si cayiman iyadoo loo eegayo nooca wax soo saarka.
Qiimaha Komishanka EPttAVM iyo khidmadaha rarka
Si aad u iibiso EPttAVM, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso guddiyadaada markaad dejineyso qiimahaaga. Qiimaha guddiga way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo qeybaha kala duwan ee alaabada. Qiimayaasha guddiga waxaa lala wadaagaa milkiilayaasha dukaanada inta lagu gudajiro furitaanka bakhaarka.
Qiimaha Guddiga EPttAVM
Waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso sicirka komishanka EPttAVM marka aad dejiso qiimahaaga iibinta EPttAVM / e ptt avm. Qiimaha guddiga way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo qeybaha kala duwan ee alaabada. Qiimayaasha guddiga waxaa lala wadaagaa milkiilayaasha dukaanada inta lagu gudajiro furitaanka bakhaarka. Qaar ka mid ah qiimayaasha guddiga waa sida soo socota:
Hooyo / Cunug / Caruus: 15%
Kaabista nafaqada: 10%
Alaabada cad: 5%
Kombiyuuter / Kiniin: 5%
Qalabka kombiyuutarka / Kiniiniga: 10%
Qurxinta guriga: 10%
Qalabka elektiroonigga ah ee guriga / TV: 5%
Filim / Muusig / Ciyaar: 8%
Jimicsi / Cardio: 10%
Sawir / Kaameero: 5%
Qalabka sawirrada / Kaamirada: 10%
Dharka / Qalabka: 10%
Hiwaayadaha / Caruuta: 10%
Qalabka kaamamka: 10%
Is-qurxinta / Caafimaadka / Daryeelka: 10%
Xafiiska / Goobta: 8%
Taayirrada gawaarida: 5%
Gaari / Baabuur: 10%
Kabaha Dibadda: 10%
Dukaanka Xayawaanka: 10%
Pilates / Yoga: 10%
Cayaaraha / Dibadda: 10%
Suuqa weyn: 10%
Qurxinta / Muraayadaha / Daawashada: 10%
Qalabka taleefanka: 10%
Suuqa dhismaha / Beerta: 10%
Alaabada dayactirka korantada: 5%
Khidmadaha Duujinta EPttAVM
Shirkadaha ku iibiya EPttAVM waxay sidoo kale ka faa'iideysan karaan xamuulka PTT. Khidmadaha rarka waxaa lagu dallacaa si ka duwan sidii hore iyadoo la raacayo qiimayaasha desi ee xirmada wax soo saarka. Lacagtani waa sida soo socota:
0-1,99 kg / desi 3,70 TL
2,00-3,99 kg / desi 4,10 TL
4,00-7,99 kg / desi 4,90 TL
8,00-11,99 kg / desi 5,10 TL
12,00-14,99 kg / desi 5,50 TL
15,00-29,99 kg / desi 8,50 TL
30,00-49,99 kg / desi 16,10 TL
50,00-69,99 kg / desi 28,00 TL
70,00-100,00 kg / desi 43,00 TL
Warqadda qaansheegta / Diritaanka Ogeysiiska / Dukumiinti 2,50 TL
Nidaamka Canshuuraha ee Dukaanka EPttAVM iyo Biilasha
Markaad ka iibiso EPttAVM, waxaa kugu waajiba inaad noqotid cashuur bixiye sida ku xusan nidaamka canshuuraha TC iyo dhaqamadaada. Shirkad ahaan halkaan aad ku iibineyso, waa inaad qaansheegataa alaabada aad iibiso ka dibna canshuurtaada ku bixiso qaan-sheegyadaan.
Hannaanka Canshuuraha ee Bakhaarka "EPttAVM"
Waxaad la xiriiri kartaa la-taliyahaaga dhaqaalaha ama xisaabiye si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan waajibaadkaaga canshuuraha; Maamulka Dakhliga ama www.egirisimci.gov.t waa Waxaad ka heli kartaa macluumaad at.
Warqadda Xaanshida Bakhaarka ee EPttAVM
Adiga ayaa mas'uul ka ah gooynta qaansheegyadaada la xiriira badeecada la iibiyay ka dib iibkaaga oo aad u dirto macaamiisha. Suurtagal maaha in lagu sameeyo iibsi horudhac ah iibkaaga halkan.
Maareynta Bakhaarka EPttAVM
Marka lagu daro habka loo furo dukaan lagu iibiyo EPttAVM, waxaa muhiim ah in la sameeyo daraasadaha suuq geynta dijitaalka. Samaynta suuq geynta dijitaalka ah waxay muhiim u tahay kor u qaadida dukaankaaga iyo alaabadaada. Adoo ku qabanaya shaqooyinkan kanaalka kala duwan, waxaad ku kordhin kartaa iibkaaga halkan adoo ku hagaajinaya taraafikada dukaankaaga EPttAVM; sidoo kale waad kordhin kartaa wacyigaaga shirkadeed.
Suuqgeynta Dijital iyo SEO
Marka lagu daro habka loo furo dukaan lagu iibiyo EPttAVM, waxaa muhiim ah in la sameeyo daraasadaha suuq geynta dijitaalka. Samaynta suuq geynta dijitaalka ah waxay muhiim u tahay kor u qaadida dukaankaaga iyo alaabadaada. Adoo ku qabanaya shaqooyinkan kanaalka kala duwan, waxaad ku kordhin kartaa iibkaaga halkan adoo ku hagaajinaya taraafikada dukaankaaga EPtt AVM (avm ptt); sidoo kale waad kordhin kartaa wacyigaaga shirkadeed. Waxaan liis garayn karnaa howlaha aasaasiga ah ee aad ku sameyn karto suuq geynta dijitaalka sida soo socota:
Daraasadaha SEO: Sameynta daraasadaha SEO waa mid ka mid ah codsiyada ka caawin doona badeecadaada inay darajo sare ku yeeshaan weydiimaha raadinta. Waad kordhin kartaa taraafikadaada dabiiciga ah adoo sameysanaya daraasado SEO ah boggaaga dukaanka iyo bogagga wax soo saarka. Shaqooyinka aad ka qaban karto waqtigan waa sida soo socota:
Ku dar erey-fureyaal laxiriira howlahaaga iyo badeecooyinka aad iibisid qeybta sharaxaada ee boggaaga dukaanka.
Had iyo jeer ku dar faahfaahinta sida sheyga sheyga, magaca buuxa, astaanta, midabka cinwaanka sheyga.
Diyaarso sharraxaadda badeecada oo faahfaahsan. Marka lagu daro adeegsiga ereyga-fure ereyada la xiriira ee sharraxaadan, waxaad la wadaagi kartaa sawirro tayo leh oo ku saabsan badeecada waxaadna ku dari kartaa fiidiyowyada la xiriira wax soo saarka qeybta sharraxa. Diyaarinta bogga qeexitaanka si faahfaahsan ayaa gacan ka geysan doonta in si fiican loo tilmaamo boggan.
Xayeysiiska Adwords: Xayeysiiska Adwords ayaa ka mid ah noocyada xayeysiinta ee ay badanaa isticmaalaan shirkadaha e-commerce. Adoo dooranaya ereyada furaha ah ee laxiriira weydiimahaaga raadinta ee Google, waad kaxayn kartaa taraafikada oo aad u kordhin kartaa dib u warshadeynta alaabadaada iyo dukaankaaga dukaameysiga 'EPttAVM / e-ptt' oo leh ololayaasha xayeysiinta Adwords.
Xayeysiinta warbaahinta bulshada: Xayeysiinta warbaahinta bulshada ayaa aad wax ku ool u ah kor u qaadista alaabada, kordhinta wacyiga sumadda iyo gaaritaanka dhagaystayaasha bartilmaamed ee kala duwan. Adoo u diyaarinaya xayeysiintaada laxiriirta badeecadaada dukaankaaga 'EPttAVM / EPttAVM com store', waxaad kusoo jiidan kartaa taraafikada dukaankaaga khadadka bulshada.
Xulashada Ganacsiga Kaabayaasha Ganacsiga ee Dukaanka EPttAVM
In kasta oo iibinta EPttAVM ay fursad siineyso inay ka dhacdo internetka oo aad la xiriirto macaamiisha, waxay kugu adkayn doontaa inaad ka soo baxdo labadaba dareenka shirkadeed iyo hanaanka sumadaynta, kaliya inaad halkan joogtaan oo aadan lahayn goobta ganacsigaaga internetka. Aad ayey muhiim u tahay inaad haysatid goobtaada elektaroonigga ah gaar u ah sameynta iyo sumeeynta.
Abuuritaanka boggaaga e-commerce wuxuu ku siinayaa faa iidooyin dheeri ah si aad u abuurto sumaddaada, u dejiso siyaasadaha qiimahaaga markasta oo aad rabto, inaadan bixin guddiyada suuq-geynta suuq geynta isla markaana aad ku maareyso liiska macaamiishaada oo aad bixiso ololeyaal e-commerce shaqsiyeed.
Haddii aadan horay u dhigin bog internet e-commerce, si dhakhso ah oo fudud ayaad u diyaarin kartaa bartaada adiga oo adeegsanaya xirmooyinka kaabayaasha e-commerce. Waad lahaan kartaa dukaan internetka ah, adoo xoogga saaraya kaliya ganacsigaaga iyo iibka wax soo saarka, adiga oo aan la macaamilin shaqooyinka farsamada ee asalka ah.
Xirmooyinka kaabayaasha ganacsiga ee elektaroonigga ah waxay leeyihiin qiime kala duwan iyadoo kuxiran adeegyada iyo astaamaha ay bixiyaan; si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo astaamo ah oo ay tahay in lagu daro xirmadaan guud ahaan. La'aanta astaamahan ayaa sababaya in goobta ganacsigaaga e-commerce uusan ku dhismin aasaas adag. Markii aad dooraneyso xirmada kaabayaasha e-commerce, gaar ahaan aaladda iyo astaamaha aad xoogga saareyso:
Waafajinta matoorka raadinta: Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ayaa ah in xirmada kaabayaasha ee aad dooratid ay la jaan qaadi karto matoorada raadinta. Marka lagu daro xaqiiqda ah in waxyaabaha ku yaal boggaaga si sax ah loo tilmaami karo, waa inaad awood u yeeshaa inaad qabato shaqada SEO ee aad rabto boggaaga.
Adeegga farsamada iyo taageerada macaamiisha: Bixiyehaaga kaabayaasha e-commerce waa inuu awoodaa inuu ku siiyo taageero farsamo ah hab dhaqso leh oo tayo leh; Isla mar ahaantaana, waxay awood u yeelan doontaa inay kaa caawiso inaad shaqadaada si wanaagsan u qabato adigoo ku siinaya taageero laxiriirta arrimaha laxiriira ganacsiga iyo sidoo kale dhibaatooyinka la xiriira boggaaga.
Is-dhexgalka suuqyada meheradda ah: Markaad rabto inaad abuurto kanaal dheeri ah oo loogu talagalay bartaada internetka e-commerce, waxaad ubaahan kartaa inaad dukaan ku furto suuqyada suuq geynta leh. Xaaladdan oo kale, is-dhexgalka adeegga kaabayaasha ee aad dooratid suuqyada ayaa fududeynaya geedi socodka furitaanka bakhaarka iyo hannaanka liiska wax soo saarka.
Ku habboonaanta qalabka SEO iyo matoorada raadinta Xirmooyinka kaabayaasha ee aad doorbideyso waa inay awoodaan inay ku siiyaan qalab SEO oo kaladuwan. Qaabkaan, waxaad u kordhin kartaa waxqabadka iyo qiimaha bogaggaaga adoo adeegsanaya aaladahaan xulashooyinka ereyga muhiimka ah iyo daraasadaha SEO ee bogagga. La'aanta is-waafajinta Google ee boggaaga ayaa kuu horseedi doonta inaadan u soo gaadhin dadka isticmaala. Sababtaas awgeed, aaladda SEO waa mid ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah ee xirmada kaabayaasha.
Maamulka alaabada iyo maamulka: Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee boggaaga ganacsiga ayaa ah inaad si sax ah u maamuli karto badeecada iyo qaybaha boggaaga. Mid ka mid ah astaamaha ay tahay in lagu daro xirmadaada elektaroonigga ah waa inay ahaataa maareynta alaabada iyo alaabada. Sidan, waxaad u cusbooneysiin kartaa badeecada ku yaal bartaada wakhti kasta, sameysan kartaa alaabooyin cusub oo soo saar ah, hubin kartaa heerka saamiyada, iyo sameynta qaybo cusub, oo aad ku soo bandhigi kartaa badeecadaada bartaada internetka sifiican.
Maamulka xamuulka Waxa kale oo muhiim ah inaad raad raacdo xamuulkaaga ka dib marka aad badeecadaada u dirto xamuulka oo ay weheliso maareynta badeecada. Qaybta daba-galka xamuulka ee xamuulka ah kaliya ma sahleyso shaqadaada mid fudud, waxay sidoo kale hubineysaa in amarradaadu ay gaaraan cinwaannada saxda ah.
Xal u helista lacag bixinta: Nidaamyada lacag bixinta sidoo kale waa faahfaahin muhiim ah xagga ganacsiga e-ganacsiga. Ku haysashada xalka nidaamka lacag bixinta kaladuwan ee boggaaga ayaa u oggolaanaya isticmaalayaasha raba inay ku bixiyaan habab kala duwan inay si raaxo leh u dukaameystaan. Intaa waxaa sii dheer, inaad heshiis la yeelato bangiyo kaladuwan ayaa kuu sahlaya inaad kubixin karto xalalka POS Virtual POS ee kaararka deynta. Waa inaad hubisaa in xirmada kaabayaasha ee aad dooratay ay ku bixinayso qaabab kale oo lacag bixin ah.
Qalabka Blog iyo emaylka: Suuqa iyo iimaylka suuqgeynta ayaa ah khadadka suuqgaynta muhiimka ah ee shirkadaha iibiya internetka. Aad ayey muhiim u tahay inaad soosaaro waxa kujira boggaga internetka e-commerce-ka waxaadna ku sameyn kartaa daraasado SEO ah waxyaabaha kujira. Intaa waxaa sii dheer, waa inaad awood u yeeshaa inaad sameyso nashaadyo gaar ah oo suuqgeyn suuq geynta ah oo loogu talo galay isticmaaleyaasha rukumada u leh boggaaga. Maaddaama suuq-geynta e-maylku ay tahay mid ka mid ah kanaalada dib-u-warshadaynta ee kanaalada suuq-geynta dhijitaalka ah, waa inaad hubisaa in xirmadaada kaabayaasha elektaroonigga ay ku jiraan qalab elektroonik ah
Is dhexgalka warbaahinta bulshada: Si aad u awoodo inaad sameyso waxqabadyada suuq geynta warbaahinta bulshada, goobtaada e-commerce-ka sidoo kale waa inay lashaqeeysaa xisaabaadka warbaahinta bulshada. Tan darteed, waa inaad hubisaa inaad haysato aaladaha warbaahinta bulshada ama is dhexgalka warbaahinta bulshada ee kaabayaashaada.
Aaladda warbixinta iyo falanqaynta: Mid ka mid ah waxyaabaha lagu qurxiyo sameynta ganacsiga ee jawiga dijitaalka ah ayaa ah in natiijada dhammaan daraasadaha la falanqayn karo lagana warbixin karo. Waa inaad hubisaa in xirmada kaabayaasha ee aad dooratay inay ku siiso warbixinno iyo agab falanqeyn ku saabsan arrimo badan sida taraafikada goobta, warbixinnada iibka billaha ah, soo booqdayaasha bogga.
Mashiinka Qeybinta EpttAVM ayaa loo gudbiyey E-Dowladda! Marka, Sidee loo Iibsadaa Maskaxda E-Dowladda?
Sidee iyo yaa heli kara maaskaro ePTTAVM?
Waa maxay HES Code? Sidee loo Helaa Hayat Eve Sığar (HEPP) Code?
Waa maxay Korantada Hada, Sidee loo Cabiraa?
Sidee loo Iibsadaa Tigidhada Tareenka oo leh HES Code? Sidee loo Helaa Hes Code? Ogolaanshaha Safarka HES Code…
Khidmadaha Xamuulyada EPttAVM
Jardiinooyinka Qaranka iyo Jardiinooyinka Dabeecadda ee dib loo furay Juun 1
Keenyaanka ayaa ku ogaan doona alaabada Turkiga iyagoo wata Ergada Ganacsiga ee Virtual
Waa maxay Monorail? Wadamadee ayey isticmaalaan?
Waa maxay Gaadiidka Tareenka?
Waxyaabaha aan ka ogaanno tareenada: Waa maxay xarriiqda xariiqda?
3. Maxay tahay sababta Boosaasta Bosphorus ah?